Ahoana ny fomba hisorohana ny làlambe sy ny tol any amin'ny Maps an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hisorohana ny làlambe sy ny tol amin'ny Maps an'ny iPhone-nao
Ruben gallardo | | Fampianarana sy torolàlana
Ianao ve anisan'ireo mampiasa ny iPhone ho mpitety GPS rehefa mitondra fiara? Ny fampiharana Maps ve no tianao? Rehefa mitondra fiara mankany amin'ny toerana alehanao ianao dia te hisoroka foana ny làlambe sy ny làlambe? Eto izahay no milaza aminao ny fomba hialana hatrany amin'ireo tranga roa ireo rehefa apetrakao ny iPhone-nao eo amin'ny solaitrabe amin'ny fiara.
Ny fanaingoana ny rindranasa sy ny fiasa izay hampiasaintsika amin'ny fitaovan'ny solosaina dia zava-dehibe tokoa mba hahafahana manitsy tanteraka ny asany amin'ny filantsika. Anisan'ireo fiasa fampiasa indrindra amin'ny finday avo lenta ny fakantsary, ny fitetezana ny tranonkala ary ny fampiasana ny fampiharana fitetezana am-perinasa. Raha ny momba an'i Apple sy ny iPhone dia manana ny rindrambaiko Maps napetraka ho default amin'ny finday paoma isika. Ary ny fomba hitrangan'izany amin'ny fampiasana hafa, azontsika atao koa ny manamboatra ny fampiasana azy. Amin'ity tranga ity dia hanazava izahay ny fomba tokony hataonao hisorohana ny làlambe sy ny làlambe amin'ny lalanao.
Na te hisoroka ianao na te-hiditra amin'ny làlambe ny tolotra sy ny làlambe dia afaka manapa-kevitra ianao. Ary io safidy io dia mavitrika foana amin'ny fitsangatsanganana amin'ny fiara amin'ny ho avy. Ka andao hiasa ary hanazava aminao, tsikelikely, ahoana no fomba ahafahanao mamela an'ity safidy ity ary aiza no ahitana azy:
Mandehana any amin'ny "Settings" an'ny iPhone
Tadiavo ny safidy izay manondro «Sarintany» ary kitiho eo
Avy eo dia tsy maintsy mitady ny safidy izay manondro "Familiana sy fitetezana" ary midira ao
Ho hitanao fa ny safidy voalohany aseho dia ny «Tol» ary «lalambe». Samy ambanin'ny fizarana "Fadio". Toy ny mahazatra dia ho kilemaina ireo safidy roa ireo. Ianao no ho tompon'andraikitra amin'ny fanapaha-kevitra momba izay tianao hofoanana na hampihetsika
izay voambara Mila misafidy teboka fanombohana sy teboka fahatongavana ianao - Avy amin'ny teboka A mankany amin'ny teboka B. Ary miankina amin'ny zavatra nofidinao tao amin'ny "Settings", ny làlana dia ho làlana iray na hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hisorohana ny làlambe sy ny tol amin'ny Maps an'ny iPhone-nao